၈၈ ရဲ့ နော်မန်: တပ်မတော် အကြီးအကဲများထံသို့ ပေးစာ - အပိုင်း (၃)
တပ်မတော် အကြီးအကဲများထံသို့ ပေးစာ - အပိုင်း (၃)
ပေးပို့သူ - ပြည်တွင်းမှ ရေတပ်နှင့် နီးစပ်ကျွမ်းဝင်သူ ဒုတပ်ရင်းမှူး တစ်ဦး
အပိုင်း ( ၂ ) ကို ဒီနေရာမှာ နှိပ်ပြီး ပြန်လည်လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက တဆက်စပ်တည်းကို တင်ပြချင်တာ တစ်ခု ရှိပါ သေးတယ်… ဒါကတော့ ကိုယ့်တူရဲ့ ဂျူနီယာ အရာရှိ ငယ်လေး တွေပါ အကုန် ပါတယ်။
တပ်မတော် (ကြည်း/ရေ/လေ) ဒီမောင်တွေကို နိုင်ငံခြားသို့ ပညာသင် စေလွှတ်ခြင်း ခံရတယ်။ ကံဆိုးတာ ဘာလဲဆိုတော့ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ယခင်ကဆိုရင် မည်သည့်နိုင်ငံသွားသွား တစ်လ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၀၀) လစာ ထောက်ပံ့တယ်။ တခြား ထောက်ပံ့ကြေး တွေနဲ့ပေါင်းရင် နိုင်ငံခြားမသွားခင် ဒေါ်လာ (၇၀၀) နီးပါးရတယ်။ လစဉ်ကိုလည်း ဒေါ်လာ (၂၀၀) ရတယ်။ ရုရှားဆိုရင် ဒေါ်လာ (၂၅၀) ရတယ်။ အဲဒါ အရင်တုန်းကပါ .. နိုင်ငံခြားသွားသူတွေ အခက်အခဲမရှိ ချောင်ချောင် လည်လည်နဲ့ သွားနိုင်၊ ပညာသင်နိုင်ကြပါတယ်။
အခုတော့ အဲလို မဟုတ်တော့ဘူး။
ရုရှားနိုင်ငံက လွဲလို့ ကျန်တဲ့ တရုတ်၊ မလေးရှား၊ ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယ စတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ပညာတော်သင် သွားသူတွေကို လစဉ်ထောက်ပံ့တဲ့ ဒေါ်လာ (၂၀၀) ကို မပေးတော့ဘူး။ အဲဒီ့မှာ ပြဿနာ စတာပဲ။ တရုတ်နိုင်ငံက လွဲလို့ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ သင်တန်း သွားတက်သူတွေဟာ နိုင်ငံတော် အစိုးရက ပေးလိုက်သော ဒေါ်လာငွေ မလုံလောက်မှု ပြဿနာ စတွေ့ ရပါတယ်။
တူလေးရဲ့ ဂျူနီယာတစ်ယောက် ပြောပြတာကတော့………
သင်တန်းကာလ တစ်လျှောက်လုံး ဒေါ်လာ (၇၀၀) နဲ့ ပဲ သုံးရတယ်။ တချို့ သင်တန်းတွေဆိုရင် ၉ လ တက်ရတဲ့ သင်တန်းတွေ ရှိတယ်။ ပိုက်ဆံလုံးဝ (လုံးဝ) မလောက်ဘူးတဲ့။ နိုင်ငံခြားမှာ သင်တန်းသွားတက်ပြီး ပညာသင်သူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိမြန်မာနိုင်ငံအတွက် သင်တန်း အထောက်ကူပြုမဲ့ စာအုပ်တွေ စာပေတွေကို မိတ္တူဆွဲရတာမျိုးနဲ့ ၀ယ်ယူရတာမျိုးတင် ဒေါ်လာ (၅၀၀) လောက်က ကုန်သွားကြတယ်တဲ့။
မိတ္တူက မဆွဲလို့ မဖြစ်ဘူးလေ။ နို့မို့ဆိုရင် နိုင်ငံခြား ပညာသွားသင်တာ အလကားပဲတဲ့။ ပညာရပ်၊ ဘာသာရပ် တစ်ခုမှ မကျန်အောင်တော့ စုံစုံလင်လင် မိတ္တူဆွဲရမယ်။ အဲဒီတော့ သူများ နိုင်ငံတွေက သင်တန်းသားတွေဟာ ရုံးပိတ်ရက်တွေဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်အချိန်မှာ မုန့်စား ဘာစား အပြင်သွား လုပ်နိုင်ကြပေမဲ့ မြန်မာသင်တန်းသားတွေ ခမျာမှာတော့ အိပ်ဆောင် အခန်းထဲမှာ ကြိတ်ပြီး အိမ်က ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ အကြော်လေးနဲ့ အပေါစား ပေါင်မုန့် ခပ်ကြမ်းကြမ်းကို ရေနဲ့ မျိုချပြီး အခန်းအောင်း နေရတယ်တဲ့။
စာကို အဓိကထား ကြိုးစားတဲ့အခါ အဲဒီလို အထွေထွေ အခက်ခဲလေးတွေက အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေတယ်။ တခြားနိုင်ငံက အရာရှိတွေ လူတန်းစေ့ သုံးစွဲနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာအရာရှိ သင်တန်းသားတွေမှာ လွန်စွာ မျက်နှာငယ်ကြရကြောင်း၊ အနှိမ်ခံရကြောင်း၊ နဂိုကမှ မြန်မာနိုင်ငံကို အပြစ်ပြောချင် နေတာမို့ ပိုဆိုးကုန်တာပေါ့။ နိုင်ငံခြားသင်တန်း သွားတက်တဲ့ မြန်မာအရာရှိများမှာ ခေါင်းမဖေါ်ရဲအောင် ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်တဲ့။
နောက်ဆုံးရ သတင်းကတော့ ဘာလဲဆိုရင် (အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါ) တချို့သော မြန်မာအရာရှိတွေဟာ ထောက်ပံ့ကြေး ကုန်သွားလို့ သုံးစရာ ငွေမရှိတော့တဲ့အတွက် ပညာတော်သင်သွားတဲ့ နိုင်ငံမှာ ၀င်ငွေ အနည်းငယ်ရသော အချိန်ပိုင်း အလုပ်သမား အလုပ်ကို ၀င်လုပ်ဖို့တောင် ကြိုးစားကြတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဘယ်လောက် သနားဖို့ကောင်းလဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံတော် အစိုးရကမှ မထောက်ပံ့တော့လည်း ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ရပ်တည်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းရှာ ကြိုးစားရတော့တာပေါ့။ အဲ့ဒီတော့ မြန်မာဆိုရင် နိုိင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေက လုံးဝကို အထင်မကြီး ကြတော့တာပါ။
ဒါက နိုင်ငံတော် အစိုးရက လစဉ်ထောက်ပံ့နေကျ ဒေါ်လာ (၂၀၀) ကို ဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူး ရလာဒ်ကောင်းတွေပါ။ ဒီလို အပြင်မှာ အလုပ်ထွက်လုပ်မဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးက တိုင်းပြည်ဂုဏ် ညှိုးနွမ်းစေတယ် ဆိုပေမဲ့ ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ၊ ဒါဟာ အဲဒီ အရာရှိတွေရဲ့ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့မှာ စစ်သားဖြစ်နေတော့ နိုင်ငံတော်က ပေးအပ်တဲ့ တာဝန် ကိုလည်း ကျေပွန်အောင် မမှိတ်မသုန် ထမ်းဆောင်ကြရတယ်။ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ငွေမလောက် ငှတဲ့ အခက်ခဲကိုလည်း မိမိဖာသာ မိမိဖြေရှင်းနေရတယ်။
စစ်အသုံးစရိတ်ကိုတော့ တပ်မတော်က နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာနဲ့သုံးစွဲကြတယ်။ နိုင်ငံတော်ငွေကို တဖက်လှည့်ယူပြီး ချမ်းသာနေကြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်များသည်လည်း မိမိသားသမီး ကောင်းစားဖို့ ကျတော့ ကြည့်ကြတယ်။ နိုင်ငံတော် ပိုက်ဆံဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်သားသမီးများ Singapore, Bangkok, Australia စတဲ့ နိုင်ငံတွေကို အပျော် shopping ထွက်ကြတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ နာမည်ကြီး night club, KTV တို့တွင်လည်း လူကြီးသားသမီးများဟာ သူ့အဖေ ဗိုလ်ချုပ်တွေရှာပေးသော နိုင်ငံတော် ပိုက်ဆံကို စပါယ်ရှယ် သုံးဖြုန်းကြတယ်။
(BME, Pioneer, DJ Bar, Olympic စသည့် club များ၊5star hotel များတွင် တိုင်းမှူး သား၊ တိုင်းမှူး သမီး၊ ၀န်ကြီးသား၊ ၀န်ကြီးသမီးများ သောင်းကျန်းနေကြသည်ကို ညစဉ်လိုလို တွေ့မြင်နိုင်တယ်။ မယုံရင် club manager, hotel manager များကို ခေါ်ယူစစ်ဆေး မေးမြန်း ကြည့်နိုင်သည်) တိုင်းမှူး သားသမီး၊ ၀န်ကြီးသားသမီးတွေ ကတော့ဖြင့် အပျော်တွေ လွန်ပြီး သုံးဖြုန်းနေကြတယ်။ ၄င်းတို့မှာ အမှန်တကယ် နိုင်ငံတော် ပိုက်ဆံနှင့် မကင်းရှင်းကြပါ။ သို့သော် နိုင်ငံတကာ ရှေ့မှောက်တွင် တကယ်တမ်း လက်တွေ့ကျကျ နိုင်ငံတော်အတွက် အမှန်အကန် အလုပ်လုပ်နေကြရသော သင်တန်းသား အရာရှိများမှာမှု ဒုက္ခတွေ ပင်လယ်ဝေ နေကြသည်ကို ကျွန်တော်တို့၏ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ တပ်မတော်အကြီးအကဲ ၂ ယောက် သိပါလေစ။
နိုင်ငံခြား သင်တန်းသွား အရာရှိတွေကို သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးတွေက မထောက်ပံ့ဘူးလား၊ မစောင့်ရှောက်ဘူးလား ဆိုတဲ့ အမေးရှိပါတယ်။
သံရုံးက မေးတော့မေးရှာပါတယ်။ ၀တ်ကျေတန်းကျေပဲ “အဆင်ပြေလား၊ သင်တန်းမှာ ကြိုးစားနော်၊ ပိုက်ဆံရော လောက်လား..”
မလောက်လည်း သူပေးမှာမှ မဟုတ်တာ။ တကယ်လို့ သံရုံးက ပိုက်ဆံထုတ်ပေးတယ်ပဲ ထားဦး။ အဲဒီ့ ပိုက်ဆံ အသုံးစာရင်းက မြန်မာနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရောက်ပြီး သံရုံးရဲ့ စိုက်ငွေ ဘတ်ဂျက်အဖြစ် ၀င်သွားကာ နောက်ဆုံးတော့ စစ်သံမှူးရဲ့ အိပ်ကပ်ထဲကိုပဲ ရောက်သွား ရတာပါပဲ။ ကဲ ကောင်းလား... ?
နောက်တစ်ခုက နိုင်ငံခြားရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စစ်သံမှူးတော်တော်များများသည် ယင်းနိုင်ငံ၏ မြန်မာသံအမတ်နှင့် အဆင်မပြေကြသည်က များပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတာတော့ မသိပါ။
ဒါ့အပြင် ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာစစ်သံမှူးနှင့် မေဖီးလ် (ရုရှားကကျောင်း) ကျောင်းအုပ်ကြီးတို့ မတည့်ကြပါ။ ရန်သူတွေ ဖြစ်ကြတယ်တဲ့။ သူတို့ ခတ်ကြတာ ကြားက မြေစာပင်အနေနဲ့ သင်တန်းသား အရာရှိများမှာ စာမေးပွဲကျပြီး မြန်မာပြည်ကို မှင်နီနဲ့ ပြန်ရတဲ့ အထိပါပဲ။
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံဆိုင်ရာ စစ်သံမှူးနှင့် သံရုံးလည်း မတည့်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာစစ်သံရုံးက ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာအ၀င်အထွက်များ နောက်ကျခြင်း၊ အချိန်မှီ မရရှိခြင်း၊ ချက်ချင်း အကြောင်းမပြန်ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
သံရုံးနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းပို့ တင်ပြရမည်ဆိုလျှင် တခြားသော နိုင်ငံများမှ သံရုံးများဟာ မိမိနိုင်ငံသားကို စောင့်ရှောက်တယ်၊ ကူညီတယ်။၊ အခက်အခဲရှိရင် ဖြေရှင်းပေးတယ်။ မြန်မာသံရုံးကတော့ အဲလိုမဟုတ်ပါ။ မြန်မာအရာရှိတစ်ယောက် စစ်သံမှူးကို သွားရောက် ဂါရ၀ပြုမည် ဆိုရင်ပဲ ရုံးအုပ်ဆိုသည့် အခြားအဆင့် တပ်ကြပ်ကြပ်ကြီးလို ကောင်က သင်တန်းသား အရာရှိကို ကောင်းကောင်း brain wash လုပ်လိုက်တယ်။ နောက်ဆုံး သင်တန်းသား အရာရှိများမှာ မြန်မာသံရုံးသို့ အခက်ခဲ တင်ပြပြီး အကူအညီ မတောင်းရဲ ကြတော့ပါ။
ကျွန်တော် ယခု တင်ပြခဲ့တာတွေကတော့ .. လက်ရှိ အချိန်မှာ နိုင်ငံဝန်ထမ်း တပ်မတော်သားများ အမှန်တကယ် ကြုံတွေ့ နေရသည့် အခက်ခဲ ပြဿနာများကို ... အမှန်တရားအား ဖုံးကွယ်ပြီး ကောင်းသည် တော်သည်ဟု လိမ်ညာ ခံနေရသော တပ်မတော် အကြီးအကဲများ သိရှိစေရန် သတင်းပို့ တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်မှ မပါဝင်ပါ။
ဖြစ်စဉ် အကြောင်းအရာ အကျဉ်းချုပ်ကို တင်ပြရမည်ဆိုရင်…….
(၁) စစ်တက္ကသိုလ်တွင် လက်ရုံးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့ ရွေးချယ်သည့်အခါ မည်သည့် အနှောင်အဖွဲ့ သံယောဇဉ်မှ မပါပဲ၊ ဘယ်မျက်နှာမှ မလိုက်ပဲ၊ မှန်မှန်ကန်ကန် အရည်အချင်းရှိသူနှင့် သင့်တော်သူကို ရွေးချယ်စေလိုပါသည်။
(၂) လက်ရှိ ရေတပ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော နေရာကောင်းများရှိ အရာရှိလူလည်များနှင့် မကောင်းသော နေရာများရှိ အရာရှိငမွဲများကို မျှတမှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါသည်။ နှစ်ကာလ အပိုင်းအခြား ကန့်သတ် သတ်မှတ်၍ စနစ်တကျ posting ကို ရေးဆွဲ စေလိုပါသည်။
(၃) စစ်ရေး အမြင်အရ ရခိုင်ရေတပ်စခန်းတွင် အရာရှိအင်အား မြောက်မြားစွာ လိုအပ် လျက်ရှိသောကြောင့် ၄င်းရေတပ်စခန်းတွင် စစ်ရေယာဉ်မှူး အရာရှိ များစွာဖြင့် နယ်စပ်ဒေသ ပိုင်နက်ရေပြင်ကို ကာကွယ်ရာရောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(၄) နိုင်ငံခြားသင်တန်းသား အရာရှိများ တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေးရရှိပြီး၊ ရုရှားကဲ့သို့ လစဉ်ထောက်ပံ့ကြေးများ ယခင်အချိန်များကလို ပြန်လည်ထုတ်ပေး ထောက်ပံ့မည်ဆိုပါက ပညာသင်သွား အရာရှိများ စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားခြင်း မှ ကင်းဝေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၅) ယခု အချိန်တွင် မဟာရန်ကုန်မြို့တော်တွင် ဗိုလ်ချုပ် သားသမီးများ အလွန်တရာမှ ဆိုး ၀ါး နေကြပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဗိုလ်ချုပ် သမီးများမှာ အဆိုးဆုံးဖြစ်ကြသည်။ night club များ၊5star hotel များ၊ KTV များ၊ pub များတွင် ဗိုလ်ချုပ်သမီးများနှင့် အပေါင်း အသင်းများသည် ဘေးပတ်ဝန်းကျင် အမြင် မသင့်တော်လောက်အောင်ကို အသားကုန် သောင်းကျန်း နေကြပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်သားသမီးများ ဖြစ်ကြသောကြောင့် ဆိုင်ပိတ်ခံရမှာ အလုပ်ဖြုတ်ခံရမှာ ကြောက်ရွံ့၍သာ ဆိုင်ရှင်များ မပြောရဲပဲ ငြိမ်နေကြရပါသည်။
နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲများ အနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်သားသမီးများကို ယခုလို ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ် သောင်းကျန်းနေသည့် ပြည်သူလူထု အကြည်ညိုပျက်စေသော ကိစ္စမျိုးမဖြစ်ရန် ထိန်းသိမ်း ပေးကြစေလိုကြောင်း စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှ တဆင့် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
နိုင်ငံတော်နှင့် တပ်မတော်ကောင်းစားရေး မြင်တွေ့လိုသူ
ပြည်တွင်းမှ ရေတပ်နှင့် နီးစပ်ကျွမ်းဝင်သူ ဒုတပ်ရင်းမှူး တစ်ဦး
Posted by နော်မန် at 8:42 AM
ပညာတော်သင် တဲ့လား … အပိုင်း (၁)
အတွင်းကြေ မြန်မာ့တပ်မတော်ထဲက လက်ရှိ တပ်ပြေးပြဿနာမျ...
မတရားတဲ့ ဥပဒေ အရေးယူ တုံ့ပြန်ဖို့ ဒေါ်စု တိုက်တွန်း...
မတ်လ သူရဲကောင်းများသို့ အမှတ်တရ
၂၂နှစ်မြောက် ကိုဖုန်းမော် နှစ်ပတ်လည် မြန်မာနိုင်ငံ...
စိန်ခေါ်မှုတွေကို ညီညွတ်စွာ ရင်ဆိုင်ကြဖို့ ဒေါ်စု တို...
ရဲဘော်ကြီး ဖုန်းမော် ကျဆုံးခြင်း ၂၂ နှစ်မြောက် အမှ...
UWSA အား နအဖ က ပစ်မှတ်ရှာနေမှု သတင်း
ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ဒေါ်စု အပေါ် ကန့်သတ်မှု လွန်ကဲ
၀ အား နအဖ အင်အားသုံး ခြေမှုန်းတော့မည်လော
တပ်မတော် အကြီးအကဲများထံသို့ ပေးစာ - အပိုင်း ( ၂ )
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥပဒေ မဇ္ဈိမက လက်ခံရရှိ
ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ထုတ်ပြန်ပြီး တပ်တွင်းပြင်ဆင်မ...
သိုးထိန်းရဲ့ ဘ၀ကောက်ကြောင်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသ - အပိုင်...
တပ်မတော် အကြီးအကဲများထံသို့ ပေးစာ - အပိုင်း (၁)
မြန်မာ၂၁ ဦးပါ ပြန်ပေးဆွဲခံ သင်္ဘောနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ေ...
ကမ္ဘာ့လူငယ် ခေါင်းဆောင် ဇိုရာဖန်းနှင့် စကားစမြည်